Ntu: ntuziaka ulo eji eme ulo ise ka ha too!
Ndụmọdụ iji mee ka ntutu gị too ngwa ngwa
Mma	 16 May 2015
Ọtụtụ ụmụ agbọghọ mgbe ha banyere oge uto na-amalite ichegbu onwe ha, n'etiti ọtụtụ ihe, gbasara mbọ ha. Shortdị dị mkpụmkpụ, dị ka nne na-egbutu ya, ma ọ bụ ụdị nchekasị ahụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Ọbụna ịchọ ịnweta nnukwu mbọ ọtụtụ enweghị ike ichere oge dị mkpa ka ha too, ya mere, ha na-agbaso usoro nke na-enyere aka na ntu ahụ ike. Mara ụfọdụ usoro dị mfe, na ọbụnakwa nke eji arụ ụlọ, na-enyere aka ntu.
Kedu otu esi eme ka mbọ gị too ngwa ngwa? Arụrụ n'ụlọ Atụmatụ!
Karịa ikwe ka ntu ahụ too, ọ kwesịrị itolite ahụike, yabụ a ghaghị ịgbanwe ụfọdụ omume kwa ụbọchị, gụnyere na nri. Agbanyeghị, na mgbakwunye na omume na-agbanwe agbanwe, ụfọdụ ihe nzuzo a na-eme n'ụlọ na-enyere aka ịnwe mbọ ogologo, nke mara mma ma dị mma.
lemon na mmiri ara ehi
Ntụziaka kachasị dị mfe ma dịkwa ọnụ ala bụ iji lemon na mmiri ara ehi, emechaa, onye na-enweghị ihe ndị a n'ụlọ?
Gwakọta mmiri ara ehi na ihe ọ lemonụ lemonụ lemon (enweghị shuga), wee tinye ntu na minit 15. Ighaghachi na nhazi ugboro atọ n'izu n'ime obere oge ị ga-ahụ nsonazụ ahụ, mbọ siri ike na-enyere aka na uto.
Ihe ọ juiceụ juiceụ kukumba
Kpoo kukumba na-ewepu akpụkpọ ahụ, tinye ntu ahụ na mado ihe dị ka nkeji 20. Enwere ike ime usoro ahụ otu ugboro n'izu ma ọ ga-ekwe omume ịchọpụta nsonaazụ ya.
Ihe ọzọ dị mfe ịchọta n'ụlọ na otu n'ime ihe eji eme maka mbọ akụrụngwa na usoro uto.
Otu ụzọ kachasị mfe iji mee ya bụ ịkụpịa ezé abụọ ma tinye mado ahụ na mbọ gị maka nkeji 10, na-eme ọgwụgwọ a otu izu, kwa ụbọchị. Nhọrọ ọzọ bụ igbutu ya otutu ma tinye ya n'ime ntu
mmiri na mmanụ oliv
Sie otu iko mmiri ma tinye ngaji mmanụ oliv abụọ, tinye aka gị na mmiri ọkụ maka nkeji iri. Ejicha aka gị mgbe usoro ahụ gasịrị, ka ngwaahịa ahụ mee ma kpoo ya. Ntụziaka a bara ọgaranya na vitamin E.
Dị ka lemon, oroma dịkwa mma maka inye aka na-eto mbọ, dịka o nwere folic acid.
Afanyekwa oroma anọ, were iberibe owu wee mikpuo ha na mmiri. Hapu owu na ntu gi ka oburu nkeji iri.
Ngwunye ihe ndi ozo iji mee ka ntu too - NOVA REPAIR
Na mgbakwunye na ndụmọdụ ndị a na ntụ ọka a na-eme n'ụlọ, m ga-achọ iji ohere ahụ wee wetara gị mgbakwunye nke nwere ike inye aka na ntu ntu, Ndozi Ọhụrụ. Ọ bụ ihe mgbakwunye nke 100%, sitere na ihe ndị ahọpụtara yana usoro etolitere dabere na ọtụtụ nyocha. Mmezi Nova adịla n'ahịa ruo ogologo oge, nke gosipụtara na ọ bụ ngwaahịa na-arụ ọrụ n'ezie, yana afọ ojuju ndị ahịa, ma ọ bụrụ na ọ rụghị ọrụ, ọ gaara ahapụ ahịa ahụ.
Isi ọrụ nke Nova Repair bụ na ntutu isi, mana ọ na-eritekwa uru na ntu na anụ ahụ, ebe ọ na-enye otu ngwongwo nke na-enyere aka ịkwalite nguzozi nke ahụ, na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na nke a gụnyere ntutu, mbọ na akpụkpọ.
Otu uru ị ga-ahụ bụ:
Ntutu na-eto ogologo oge
Ike na-enwu gbaa ntutu
njedebe nke ezumike
Ọgwụgwụ nke ekpepụsị
Ntu na-eto ngwa ngwa
Akpụkpọ ahụ mara mma karị ma debekwa edozi
Ebee ka ịzụta Nova Mmezi?
A na-ere Ndozi Nova naanị na ịntanetị, na ebe nrụọrụ weebụ ya, na-enye.novarepairoficial.com/. Buyzụta, nweta ebe nrụọrụ weebụ ma tinye usoro gị na-egosi adreesị ị ga-achọ nnyefe ahụ, wee mee ịkwụ ụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na ijibeghị ịzụ ihe n'ịntanetị, echegbula onwe gị, saịtị ahụ na-enweta azụmahịa ego kwa ụbọchị ma bụrụ ebe echedoro kpamkpam.
Zụta ị nwere ike pịa bọtịnụ ndị na-esonụ:
Ngwaahịa na-enyere aka ike ma too ntu
Na mgbakwunye na usoro esi arụ n’ụlọ anyị kwurula banyere ya n’isiokwu bu nke a ụzọ, ụfọdụ ngwa ahịa nwekwara ike inye aka n’ime ka itolite ntu wee nyere ha aka ịdị ike karị, nke na-enyere aka igbochi mmebi na ịpụpụ. Lee n'okpuru ihe ha bụ!
Horse Casco bụ ngwaahịa nke dị n'ahịa ruo ọtụtụ afọ, n'ihi arụmọrụ ya na nsonaazụ ọ na-eweta. Dị ahụ nwere akara ngwaahịa zuru oke, nke gụnyere ntọala ntu, ịtụgharị, na-ewusi ike, hypoallergenic base, na ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ, ị nwere ike ịchọta ya na ahịa ọgwụ ọ bụla na Brazil, mana ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwekwara ike ịzụta ya na weebụsaịtị Drogaria Araújo, nke na-enye nnukwu ọnụ ahịa yana, dabere na mpaghara ebe ị bi, nwere nnyefe ozugbo. .
Na Horse Hoof, Betalfratus bụkwa ngwaahịa egosiri maka ndị nwere mbọ, adịghị ike mbọ, na-enwe nsogbu itolite na ịpụpụ. Ọ na-arụ ọrụ dị ka enamel, nke a ga-etinye aka na ntu ahụ, dị ka egosiri na ntinye ngwugwu. Ọ bụ ngwaahịa dị ike, ọ bụ ya mere anyị ga-eji tụlee na ọ bụ ọgwụ, ọ bụghị naanị onye na-ewusi ike.
Na mgbakwunye na ngwaahịa ndị a ga-eji na mbọ, ọ na-adọrọ mmasị ịkọ banyere mgbakwunye nri nke nwere ike inye aka kwalite nguzozi na ahụ gị, ma si otú a nyere aka mee ka mbọ gị, ntutu na hydration skin dị ike. Ihe omuma atu nke a bu Imecap Hair, n’agbanyeghi na aha ya bu ihe ndi mmadu nwere nsogbu na ntu ntu. Nke a bụ n'ihi na n'ozuzu ndị nwere mbọ na-esighi ike nwekwara nsogbu na ntutu isi, wdg.
Ndụmọdụ maka inwe mbọ dị mma
Na mgbakwunye na ikwe ka mbọ gị too, a ga-agbanwe ụfọdụ omume iji mee ka ha maa mma ma dịkwa mma.
Ụọ mmiri. Mmiri dị mma mgbe niile maka ihe niile, gụnyere ime ka mbọ gị sie ike, mmiri ọasụ waterụ dịkwa mma, ebe ọ bụ na ha na-enyere aka ịgbanye ahụ.
Imaara na ide ihe nwere ike inyere gi aka inwe ntu? Ee, omume ide ihe, ide ihe, ịkpọ piano na ọrụ ndị ọzọ metụtara mkpịsị aka na-eme ka ọbara na-eruba na mbọ aka ma si otú a na-enyere uto ha aka.
Mee ka mbọ gị kuru ume. Ihe osise a na-ese mara mma, mana ha kwesiri iku ume, yabụ hapụ ha na-enweghị ntu mbọ ụbọchị ole na ole iji mee ka ha sie ike ma gbochie ha ịcha odo.
Nke ahụ bụ maka taa, ụmụ agbọghọ! Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ọ bụla gbasara ntu ntu, hapụ ya maka anyị ebe a na nkwupụta!
58 echiche na “Kedu otu esi eme ka mbọ gị too ngwa ngwa ma sie ike? Lee ụfọdụ Atụmatụ!"
Febụwarị 26, 2016 na 16: 27 pm - Dezie
Ọ masịrị ya!
Mee 31, 2016 na 19:33 pm - Dezie
Oiee ekele maka ntuziaka !!
June 28, 2016 na 14:29 pm - Dezie
Enwere ike iji ntuziaka ndị a mee ihe na mbọ ese ???
Julaị 1, 2016 na 09:59 am - Dezie
A na-eme ha nke ọma site na ntu a na-ejighị ntu. Wayzọ a vitamin nwere ike nweta ozugbo na ntu mgbọrọgwụ.
Julaị 1, 2016 na 18:17 am - Dezie
Ọnụ galik, anyị na-eji ugboro ole ka Q iji nweta mmelite?
Julaị 4, 2016 na 11:08 am - Dezie
You nwere ike iji mmiri na mmanụ na-egbu maramara ma emesịa?
Julaị 25, 2016 na 12:46 am - Dezie
kedu ka m ga esi eto ntu m na ato
Julaị 26, 2016 na 10:55 am - Dezie
Ndewo Gabrielle! Ihe kachasị mma bụ iji ntu ụgha na nke a.
Beatriz A. Onyekwere
Disemba 27, 2016 na 10:04 am - Dezie
Iji ntu ụgha emebie ntu a hụrụ n'anya.
Disemba 28, 2016 na 11:36 am - Dezie
Ọ dabere na ntu ahụ na otu i si eji ya, ezigbo.
September 8, 2016 na 07:22 am - Dezie
M mbọ na-ewe ogologo oge itolite ma ọ too ọ na-agbari ngwa ngwa
September 8, 2016 na 10:15 am - Dezie
Ndewo Ana! iwere mmeju iji nyere aka mee ka mbọ gị sie ike nwere ike ịmasị gị. Kedụ maka ịmara Nova Mmezi? Na mgbakwunye na ilekọta mbọ, ọ na-eme na ntutu, na-eme ka ọ sie ike ma na-egbuke egbuke. Pịa n'okpuru iji mụtakwuo: http://bit.ly/suplemento-unhas-cabelos
September 17, 2016 na 01:59 am - Dezie
M hụrụ n'anya Atụmatụ m ga-amalite na-eme taa na m na-eche otú ọtụtụ ụbọchị ọ na-ewe na-eto eto otu size dị ka foto e nwere ná mmalite ??
September 17, 2016 na 12:19 am - Dezie
ndewo m n'anya ndụmọdụ ndị m chọrọ ịma ogologo oge dmr ka ọ ga eto eto nha na mbido iji kukumba na mmiri ara ehi na lemon ??
September 19, 2016 na 11:52 am - Dezie
Nke a ga-adabere na uto nke mbọ gị, olee ahụike gị, ọrụ ndị ị na-eme, na ihe ndị ọzọ. Enweghị iwu.
September 26, 2016 na 14:24 am - Dezie
Nnọọ! M nwere 11 ụbọchị na-eto eto m mbọ. Enwere usoro dabara adaba karịa?
September 26, 2016 na 15:09 am - Dezie
Lee, Esta. Ọ dabere na ole ị chọrọ ka ha too na otu nnukwu ntu gị siri dị taa. Evertụleela iji ntu ụgha? Ejirila m template a ebe a: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado Ọ dị oke mfe iji, ha wekwara ihe karịrị otu izu na mbọ.
Ọktọba 13, 2016 na 17: 54 pm - Dezie
Achọrọ m itolite mbọ m na ọnwa 1 nke usoro ka mma?
Ọktọba 14, 2016 na 09: 47 pm - Dezie
Nwere ike ịnwale iji ngwaahịa na-ewusi ike. Ma ọ bụrụ na ị ka chere na ọ bụghị nha ị chọrọ, ịnwere ike ịnwale iji mbọ ụgha. Enweela m ụdị a: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado ma ọ dị mma! Ha bụ ezigbo eke ma nọrọ ihe karịrị otu izu na mbọ.
Ọktọba 28, 2016 na 19: 04 pm - Dezie
ihe dị jụụ fernanda mana enweghị m ike ịkwụsị ịpịcha mbọ m
November 5, 2016 na 00:29 am - Dezie
Aga m eme mmiri ara ehi lemon, nke kachasị mma mgbe nkeji iri na ise gachara ma ọ bụ hapụ ka ọ rụọ ọrụ karịa?
November 8, 2016 na 20:47 am - Dezie
Mbọ m na-ewe ogologo oge itolite ma mgbe ọ na-eto, ọ na-agbaji ma na-akpụpụ ihu
November 12, 2016 na 20:20 am - Dezie
Kedu nke usoro ndị a mbọ ka na-eto ngwa ngwa ?????????????
November 23, 2016 na 13:20 am - Dezie
OLA FERNANDA! M ga-ebu onu mmiri na mmanu oliv si na olivia mana o gha ewe otutu ubochi iburu oke nke mbido LA PHOTO
November 24, 2016 na 12:25 am - Dezie
Ọ dabere na ugboro ole ị na-eme ya ma ọ bụrụ na mbọ gị nwere ezigbo uto. Ọ bụrụ na ị nwere ịdị ngwa, nke kachasị mma bụ inwe mbọ ụgha. Enweela m ụdị a: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado.
November 28, 2016 na 00:29 am - Dezie
Kedu nke kacha adabara ndi choro inwe akuku ukwu ma ha na atusi ntu ha, biko nyere m aka, agbaala m otutu ihe, nne m anaghi ekwe m jiri ntu ugha ma amaghi m kedu ihe ọzọ m ga-eme, aga m eme otu ihe nkiri na ngwụcha afọ akwụkwọ, achọrọ m nnukwu mbọ m
Disemba 2, 2016 na 17:11 am - Dezie
Ndewo m na-eri mbọ m mana vrz a na m na-achọ ka m ghara iri ha ya mere achọrọ m ịjụ gị kedu ka m ga-esi mee ka ha too n'otu ọnwa ??? ❤❤ ????????????? ??????? ?????????????????????
Disemba 26, 2016 na 18:35 am - Dezie
Mgbe minit 10 (na galik uzommeputa) ị nwere ike ịsacha aka gị ka ị ga-ahapụ ya na ntu gị?
Jenụwarị 9, 2017 na 09:23 am - Dezie
Mmiri oroma na ụbọchị ole ịhapụ ????
Jenụwarị 11, 2017 na 20:45 am - Dezie
Ndewo, ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị tinye iberibe galik ole na ole na isi, ọ ga - enyere aka mee ka mbọ gị sie ike ma too? Daalụ maka ndụmọdụ…: 3
Jenụwarị 11, 2017 na 20:47 am - Dezie
Nri ude nwa na-emekwa ka mbọ gị sie ike, ụmụ agbọghọ !! =] # Nọrọ!
Jenụwarị 12, 2017 na 15:08 am - Dezie
Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-etinye mmiri na ihe ọ juiceụ pipụ pipin, ka ọ bụ naanị kụrụ ya na blender?
Jenụwarị 12, 2017 na 17:30 am - Dezie
Jenụwarị 12, 2017 na 15:21 am - Dezie
<3 Galik a na-akụ n’ime isi, ọ na-enye ntu ahụ nkọ ma ọ bụ na ọ dị nkịtị?
Anaghi anu isi galiki.
Jenụwarị 28, 2017 na 14:08 am - Dezie
Fernanda pfv enyere m aka ka ata galik na aru oru?
Jenụwarị 31, 2017 na 16:16 am - Dezie
Ee, ọ na-arụ ọrụ!
Jenụwarị 29, 2017 na 15:00 am - Dezie
Na vidio ị na-ekwu na anyị kwesịrị iji 3 ugboro n'ụbọchị, m ga-achọ ịma ma m ga-ewepụ ya tupu itinye ya ọzọ, ka m na-etinye otu oyi akwa n'elu nke ọzọ?
Jenụwarị 31, 2017 na 15:32 am - Dezie
Ndewo, m na-eji gel dị ezigbo mma nke na-enyere mbọ aka m aka ito ma sie ike, ọ bụ Locycare, nọọ naanị ugboro abụọ n'ụbọchị na mbọ gị, ọ nwere ike ịbụ na mbọ aka ma ọ bụ na ọ bụghị, aga m agafe ntu ahụ, ị ​​nweta nsonaazụ ! M ọzọ ngwaahịa a na Granado mmanụ na-ewusi mbọ na moisturize cuticles, magburu onwe oke !! Mana nke kachasị mma bụ ịgbalị iji ndị na-ewusi ike ma na-eme ntu kwa izu ka ndị dị ka m na-ata mbọ ha nwere ike ịhapụ ha ka ha too, ọ bụrụ na ị jiri mbọ ụgha ụgha nsonaazụ a mara mma, mana ọ na-ewe ogologo oge iji too n'ihi na ọ na-ada mbà .. ma ọ dịkarịa ala na m ọ bụ otú a! nsutu
Jenụwarị 31, 2017 na 16:15 am - Dezie
Daalụ maka ndụmọdụ, Bruna!
Febụwarị 7, 2017 na 11: 59 pm - Dezie
Ntụziaka maka lemon na mmiri ara ehi ọ dị mkpa iji mee usoro ọhụụ na ụbọchị gafere ma ọ bụ ị nwere ike iji otu ụbọchị atọ n'izu ahụ?
Febụwarị 7, 2017 na 17: 32 pm - Dezie
Ihe kachasị mma bụ ime ya mgbe ọ bụla ị na-eji ya. Ọ bụrụ na ahapụ ya na nchekwa, ọ nwere ike tufuo njirimara ya.
Febụwarị 27, 2017 na 15: 03 pm - Dezie
Ahuru m ya n'anya ???????? ☺
Eprel 19, 2017 na 13: 59 pm - Dezie
m mbọ bụ obere Achọrọ m ime ka ha otu ihe dị na foto ihe m ga-eme
Eprel 19, 2017 na 14: 01 pm - Dezie
ndi pound garlic na agwakọta na eze eze ??? ma hapụ nkeji ole
Eprel 24, 2017 na 12: 34 pm - Dezie
Ndewo Fernanda! kedu usoro ị na akwado ka mbọ m too n’otu izu. O nwere ezigbo uto. Ntu m na-etolite nro na ọbụnadị na-ehulata ma na-akụda n'akụkụ, enweghị m ike iji ntu ụgha.
Eprel 25, 2017 na 01: 04 pm - Dezie
Ọ ga-amasị m ịmara ma m nwere ike iji ntọala egosiri na vidiyo ahụ yana usoro nri lemon na mmiri ara ehi na mmiri na mmanụ, ma ọ bụ ị nwere nsogbu iji ha atọ?
Eprel 25, 2017 na 11: 37 pm - Dezie
Nwere ike iji ya n'otu oge ahụ, Camila. Mana nke kachasị mma bụ ịme otu otu iji hụ nke kachasị mma maka gị!
Mee 7, 2017 na 07:32 pm - Dezie
Cool ahụghị m ya n'anya, aga m eji lemon ahụ mmụọ mmetụta mmụọ
June 2, 2017 na 11:09 pm - Dezie
Agam eme uzo maka lemon na mmiri ara… obu obu mmiri mmiri ka obu obu ???
June 20, 2017 na 17:00 pm - Dezie
onye ọ bụla hụrụ n'anya
June 20, 2017 na 17:01 pm - Dezie
Onye a nke nwere mmiri na mmanụ na-ete ya ugboro ole n’izu.
Ọgọst 1, 2017 na 12:27 am - Dezie
I nwekwara ike iji mmanya wee nọrọ nkeji atọ na ise na ntu ahụ? You nwere nsogbu ịhapụ?
Ọgọst 30, 2017 na 11:23 am - Dezie
Jenụwarị 2, 2018 na 19:01 am - Dezie
Atụmatụ m n'anya !! M na-atacha mbọ m ọtụtụ oge, m na-agbakwa ọbara. Mana taata, ekele dịrị Chukwu m hapụrụ agwa a. Ọ dị ihe dị ka otu ọnwa. Taa mbọ m dị obere karịa, mana ha aka esighi ike maka na m na-ata nri ọtụtụ afọ. Echere m na agaghị m enwe ike ịkwụsị ịta ụta, na agaghị m ebi na-enweghị ịta ụmị. Mana ịgwa gị eziokwu, achọpụtara m na ọ bụghị ihe siri ike… ❤
Jenụwarị 2, 2018 na 19:04 am - Dezie
Mgbaghara. Tupu ha ekwuo ihe ọ bụla, edere m ihe na-ezighi ezi, na-enweghị isi na ????
Disemba 28, 2018 na 20:19 am - Dezie
Ndewo m nwere tip tb nke m jiri, ọ bụ lemon ihe ọ juiceụ andụ na kukumba ị na-eji akpụkpọ ahụ merie Peninos ma gbakwunye lemon ole na ole dabere na ole kukumba ị tinyere !!! Olileanya na a na-enyere ❤
afọ ntụ ọka
Labyrinthitis: Enwere ọgwụgwọ? Kedu ihe mgbaàmà? Chọpụta ebe a!
Nri maka ndị di na nwunye, otu esi ahọrọ nke kacha mma
ngwa ngwa metabolism
Kedu esi ewepu ntụpọ pimple? Mụta ịtụnanya na oru oma ụzọ!